Lufthansa dia mandefa Airbus A321 roa niova fo maharitra ho mpitatitra entana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Lufthansa dia mandefa Airbus A321 roa niova fo maharitra ho mpitatitra entana
Ireo fiaramanidina ireo dia hiasan'ny Lufthansa CityLine amin'ny anaran'ny Lufthansa Cargo ary hipetraka ao Frankfurt.
Ny fiaramanidina madinidinika dia ampiasaina ho fiaramanidina mpitatitra entana ihany amin'ny zotra kontinanta any Eropa.
Mahazo vavahady enta-mavesatra ny fiaramanidina hahafahan'ny kaontenera hoentina eo amin'ny tokotanin-tsambo koa.
Ny fiaramanidina mpitatitra entana dia hiasan'ny Lufthansa CityLine.
Lufthansa Cargo dia mampiasa vola amin'ny fanitarana ny fahaizany entana. Hatramin'ny fiandohan'ny taona 2022, ny orinasa dia hanolotra ny mpanjifany fahaiza-manao fanampiny any Eropa amin'ny alàlan'ny fanovana maharitra Airbus Fiaramanidina mpandeha 321 mankany anaty mpitatitra. Ho an'ity tanjona ity, ny fiaramanidina maotera maotera maotera dia hahazo varavarana entana lehibe hahafahan'ny fitaterana kaontenera amin'ny tokotanin-tsambo lehibe koa. Tamin'ny voalohany, ny fiovam-piaramanidina fiaramanidina Airbus roa dia kasaina hatao. Ireo fiaramanidina ireo dia hampiasan'ny Lufthansa CityLine amin'ny anaran'ny Lufthansa Cargo. Hipetraka ao Frankfurt izy ireo.
Ny fitomboan'ny fandefasana eCommerce cross-border dia tombanana manodidina ny 20% isan-taona mandritra ny dimy taona ho avy. Manantena ny mpanjifa fa ho fohy ny fotoana fandefasana ny entany. Io koa dia mampitombo ny fangatahana fifandraisana amin'ny zotram-piaramanidina ao Eropa.
"Ny Lufthansa Cargo dia te-hanolotra ny mpanjifa ao amin'ny sehatra eCommerce fifandraisana intra-eropeana haingana. Miaraka amin'ireo A321 niova fo, mihaona amin'ny fangatahan'ny mpanjifanay vahaolana amin'ny andro iray izahay ary manamafy ny tambajotram-pifandraisana manerantany ary koa ny fanolorana vokatra », hoy i Dorothea von Boxberg, CEO an'ny Lufthansa Cargo. “Ny karazana fiaramanidina voafantina dia afaka mitondra 28t isaky ny sidina, habetsahan'ny entana betsaka kokoa noho ny ao anaty kibon'ny fiaramanidina mpandeha. Ankoatr'ireo mpampita, mpampiditra ary mpandraharaha paositra, mpamatsy eCommerce no mpanjifa amin'ity tolotra ity, "hoy i von Boxberg nanampy.
"Manana traikefa mihoatra ny 60 taona amin'ny fitaterana an'habakabaka eropeana, ny Lufthansa CityLine dia mijoro amin'ny asa azo antoka sy mahomby amin'ny maha mpiara-miasa lehibe azy ao amin'ny Vondrona Lufthansa. Ny fahafaha-miasa sy ny hafainganam-pandeha amin'ny famaritana sy fampiharana ny fahafaha-manao vaovao no fototry ny orinasantsika. Tianay ny hampiasa ireo toetra ireo hanompoana an'i Lufthansa Cargo sy ny mpanjifany, "hoy i Steffen Harbarth, Tale mpitantana ny Lufthansa CityLine.
Ny Airbus A321s (A321P2F) navadika ho mpitatitra entana dia manolotra karama 28 taonina miaraka amin'ny elanelam-potoana 3,500 kilometatra. Ny fiovam-po dia mamela ny fampiasana paleta enta-manara-penitra amin'ny tokontany lehibe ihany koa. Ny masinina kambana Airbus A321 dia iray amin'ireo fiaramanidina maro karazana indrindra amin'ny kilasy misy azy ary mamela ny asa kaontinanta tena mahomby.